downloads 17 291
Nke a photo-adị mma na-ekpuchi dum n'ókèala Kosovo. Ọ na-gụnyere na otu oge. The mkpebi nke ala textures bụ 2m / pixel.
Onyocha ule n'okpuru P3Dv3 na-arụ ọrụ na FSX.
Were anya n'ebe Priština Airport (LYPR).
Kosovo bụ a rụrụ ụka n'ókèala na n'omume ghọtara ala na Southeast Europe na kwuru onwe ha n'aka Serbia na February 2008 ka Republic of Kosovo. Mgbe Serbia ghotara ochichi nke ókèala site Kosovo si hoputara ọchịchị, ọ ka na-aga n'ihu na-ekwu na ọ dị ka ya Autonomous Province of Kosovo na Metohija.
Kosovo bụ landlocked ke Central Balkan Peninsula. Isi obodo ya na obodo kasị ukwuu bụ Priština. Ọ-n'ókè site Republic of Macedonia na Albania n'ebe ndịda, Montenegro n'ebe ọdịda anyanwụ, na uncontested n'ókèala Serbia n'ebe ugwu, n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Ndị bi na nke Kosovo bụ 1,859,203 na ya ebe bụ 10,908 km2
Onye edemede: FTXDes - Project Open mma